Guide Blackjack Live - Play Blackjack Live (2022)
Tena	/ Fiovana	/ Play ny Blackjack
Ny lalao Blackjack dia nivoatra haingana. Ankehitriny, ny blackjack dia iray amin'ireo faritry ny casinos an-tserasera, ary mendrika hoderaina ho iray amin'ireo lalao Blackjack tsara indrindra hilalao. Raha miaina ny Blackjack amin'ny Internet dia manova ny sasany amin'ireo fitsipika, ny ankamaroan'ny lalao dia mijanona ho tsy misy dikany. Andao hijery.
Tsy dia misy firy izay tsy mitovy amin'ny lalao Blackjack sy ireo dikan-teny hafa mety niainanao an-tserasera. Ny fahasamihafana lehibe eto dia ny hilalao ao amin'ny orinasa mpivarotra mivantana ary mbola mankafy ny lalao lavitra, fa ny dikan-teny nentim-paharazana an-tserasera dia milalao miaraka amin'ny rindrambaiko fotsiny. Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony hofehezina:
Live Blackjack dia milalao miaraka amin'ny mpilalao manohitra ny trano
Ny lalao tsirairay dia hiseho eo anelanelan'ny dobo roa sy valo
Indray mandeha, tsy maintsy mahazo isa 21 tsy misy henjana ianao
Ny karatra rehetra eo anelanelan'ny roa sy sivy dia mitazona ny lanjan'ny tavany
Ny karatra rehetra hatramin'ny folo ka hatramin'ny mpanjaka dia mendrika isa folo
Ny ACE dia mety ho 1 na 11 isa arakaraka ny toe-javatra
Misy fahasamihafana hafa tsy mitovy hevitra eto. Ny lalao Blackjack dia mazàna dia manana fitsipika roa, arakaraka ny Casino, ho an'ny karatra mpilalao. Mety hiatrika tarehy na hiatrika izy ireo.
Na izany aza, ny mpivarotra dia saika hahazo karatra iray miatrika ny karatra iray ary ny karatra iray miatrika. Ny karatra faharoa dia matetika no nilalao taorian'ny nanapahan'ny mpilalao ny zavatra horaisin'izy ireo.
Ny tranonkala Casino Casino tsara indrindra indrindra
Ahoana no hilalao ny Blackjack mivantana?
Ankehitriny dia nanala ny sasany tamin'ny fototry ny traikefa mivantana mivantana ao Liveblackjack isika, fotoana izao mba hijery akaiky ny fomba hilalao. Satria afaka milalao Blackjack Online Live ianao, misy fanitsiana kely amin'ny fitsipika, fa amin'ny ankapobeny, mahitsy ny dingana. Andao hijery tsara.
Mpilalao iray mandresy mivantana raha manana mainty voajanahary (karatra 10-point + ace) izy
Raha misy mpilalao sy mpivarotra dia samy manana ny mainty, ny lalao dia mandeha "manosika"
Na ny antoko dia ho very raha mitabataba izy ireo, fa ny tanany dia mihoatra ny 21 isa
Na izany aza, raha ambany noho ny 21 isa ny tanana voalohany, dia afaka manohy fampianarana maro samihafa avy eto izy ireo. Raha ny marina, ny mpilalao dia apetraka raha te-hikapoka, hitsangana, hidina indroa, mizara, na manolo-tena. Ity misy fanazavana fohy ho an'ny tsirairay:
Hit: Ny karatra iray hafa dia natokana ho an'ny mpilalao.
Mitsangàna: Ny mpilalao dia faly amin'ny tanany ary tsy mangataka karatra bebe kokoa.
Double: Ny mpilalao dia matoky ny karatra ary maniry ny hampitombo ny haben'ny filokana roa.
Saraho: Ny mpilalao dia nanapa-kevitra ny hampisaraka ny tanany manomboka amin'ny tanana roa misaraka ary avereno ny tanana vaovao miaraka amin'ny vola mitovy.
Surrender: Ny mpilalao iray dia tsy mahita fomba handresena. Izy ireo dia nanolo-tena sy namonjy ny antsasaky ny karamany.
Vantany vao nandray fanapahan-kevitra ny mpilalao iray, ny lalao Blackjack Online mivantana dia mitohy miaraka amin'ny mpivarotra mivantana mandray ny karatra faharoa. Misy fitsipika hafa mahaliana hafa izay mety hitranga eto ihany koa:
Raha vao milalao ny hetsika rehetra dia ampitahaina ny tanana
Raha samy manana ny sandany mitovy ny tanana roa, dia hiteraka fanerena izany, ary haverinao ny volanao
Hahazo vola ny mpilalao raha toa ka ny bisy mpivarotra
Live Blackjack Live Blackjack bebe kokoa
Ny fanalahidy handresy ny lalao Live Blackjack dia ny hahitana izay rehetra azonao atao momba ny fitsipiny. Betsaka ny zavatra tokony hodinihina eto, saingy ataontsika antoka fa mila lisitra izay tokony ho fantatrao amin'ny fomba haingana sy azo antoka ianao. Ny mpivarotra Live Blackjack dia tsy tokony ho hafa noho ny ankamaroan'ny kilalao, ary tsy izany. Ity no tolotra mpivarotra Blackjack Dealer.
Ny lalao amin'ny BlackJack mpivarotra mivantana dia milalao miaraka amin'ny roa ka hatramin'ny valo
Ny deck dia mihamalemy aorian'ny fihodinana rehetra mba hanalefahana ny safidy fanisana
Raha samy manana tanana mitovy ny mpilalao roa dia hiteraka fanerena ny lalao
Ny mpivarotra dia hikapoka tanana foana amin'ny isa 16
Ny mpivarotra dia hijoro amin'ny tanana 17 malefaka
Ny mpilalao dia afaka mampisaraka indray isaky ny tanana
Na izany aza, ny mpilalao dia tsy afaka hampisaraka 4s, 5 na karatra mendrika 10 isa
Tsy afaka hamerina ny mpilalao ny mpilalao
Ireo mpilalao dia afaka midina indroa fotsiny amin'ny 9, 10 ary 11s
Ny karatra fisarahana rehetra sy ny hatony dia mahazo tombony indroa
Raha misy mpivarotra dia manana ace tarehy, tsy afaka manolo-tena intsony ny mpilalao
Ny mpivarotra mivantana amin'ny Internet dia zara raha voasokitra vato. Raha atao teny hafa dia afaka manantena ny sasany amin'ireo fitsipika ireo ianao mba tsy mitovy. Soa am-pankasitrahana anao, ny casino an-tserasera dia hanolotra anao foana amin'ny lisitra tena tsipiriany momba izay tokony hantenaina amin'ny lalao tsirairay.
Ahoana ny fomba fandoavam-bola amin'ny lalao Blackjack?
Ny karama eto dia tena mora ny manaraka. Ho an'ny volanao vola be dia be, ny tahan'ny 1: 1. Ny Blackjack dia handoa 3: 2, ary ny fiantohana dia homena vola amin'ny tahan'ny 2: 1.
Paikady Blackjack: Inona no ho fantatra
Mazava ho azy fa te-ho tsara kokoa ianao amin'ny filalaovana blackjack mivantana. Ny sisin'ny trano antonony eto dia 0.42%, ary na eo aza ny fitsipika vitsivitsy, dia ny tombony antonony izay mahasoa. Ity sisin'ny trano ity dia mihatra amin'ny lalao izay manasongadina na inona na inona eo anelanelan'ny 4 sy 8.
Misy zavatra vitsivitsy tokony hotadidinao rehefa mijery ny hilalao ny mpivarotra Blackjack Live Blackjack. Ho an'ny fanombohana, tsy te-hidina indroa amin'ny 11 ianao manohitra ny mpivarotra 10. Mbola afaka mitombo avo roa heny amin'ny 9, 10, na 11 ianao.
Aza hadino hatrany fa ny fisalasalana na ny fisarahana dia mbola mety hampidi-doza, indrindra raha milalao amin'ny ace mpivarotra ianao.